DEG DEG:- Madaafiic qasaare geystay oo goordhaw kusoo dhacay nawaaxiga garoonka Aadan Cadde ee Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Madaafiic qasaare geystay oo goordhaw kusoo dhacay nawaaxiga garoonka Aadan Cadde ee Muqdisho
Waxaa goordhaw tiro madaafiic ah lagu weeraray nawaaxiga garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, iyadoona madaafiicdaasi ay waxyeelo kasoo gaartay dad shacab ah oo deganaa agagaarka garoonka.
Ilaa labo madfac ayaa la sheegay inay kusoo dhaceen guri ku yaala agagaarka garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, waxaana sida la sheegay waxyeelo kasoo gaartay dad shacab ah oo deganaa guriga uu madfaca kusoo dhacay.
Inta la xaqiijiyay waxaa labadaasi madfac ku dhaawacantay 2 qof oo mid ka mid ah ay tahay dumar, waxayna labadaasi qof ka mid ahaayeen dadka shacab ah oo deganaa agagaarka garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Ilaa iyo haatan lama oga halka laga soo tuuray madaafiicdaan kusoo dhacday nawaaxiga garoonka Aadan Cadde, iyadoona weerarkaan uu kusoo beegmayo xilli la qorsheeynayo in 10-ka bishaan magaalada Muqdisho lagu qabto shir madaxeedka urur goboleedka IGAD.
Ma jirto cid ilaa iyo haatan sheegatay weerarkaasi madaafiicda ah ee maanta lagu qaaday nawaaxiga garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, waxaana aad u kacsan goobta ay ku dhaceen madaafiicda, inkastoo weli lagu wareersan yahay halka laga soo tuuray madaafiicdaas.
Dhinaca kale, saraakiisha amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya weli kama aysan hadlin weerarkaan madaafiic ee goordhaw lagu qaaday nawaaxiga garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, iyadoona xaaladda halkaasi ay haatan tahay mid aad u kacsan.